Shil gaari oo ay ku dhinteen 6 qof oo ka dhacay Berbera | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shil gaari oo ay ku dhinteen 6 qof oo ka dhacay Berbera
Shil gaari oo ay ku dhinteen 6 qof oo ka dhacay Berbera
Shilkan oo ahaa mid gaari,isla markaana uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada lafaruug iyo Xamaas oo ah duleedka Magalada Barbera gaar ahaan deegaan lagu Magacaabo miridha.
Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari Nooca Xamuulka qaada ee loo yaqaano Candho Medlaha iyo Gaari kale oo Bas ah kaas oo rakaab siday.
Inta ka xaqiijiyey ilaa ilaa 6 Ruux oo isugu jira Saddex Rag ah iyo Saddex Haween ah ayaa shilkaasi ku geeriyooday,waxaana sidoo kale jira dad ku dhaawacmay shilkaas oo la geeyey Isbitaalka Magalada Hargeysa.
Gaari nooca Baska ah ee rabaaka siday ayaa la sheegay in uu ka yimid dhinaca Hargeysa,isla markaana uu ku wajahnaa Magalada Burco,hayeeshee Gaariga Candha Medlaha ah uu gadaal uga yimid sidaasina uu shilka ku dhacay.
Si kastaba shilkaan geystay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ayaa kusoo aadaya xilli shalay shil sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay duleedka Magalada Hargeysa ee Soomaaliland.
Previous articleWariyaal ka tirsan Reuters oo xabsiga laga sii daayay
Next articleQadar oo $480M ugu deeqday Falastiin